Dichroic Window Firimu Vagadziri - China Dichroic Window Firimu Vatengesi & Fekitori
Chill Dichroic Iridescent Window Firimu yeGirazi Kana A ...
0.2mm Dichroic Iridescent PVC firimu Magical Chinyorwa ...
Bhuruu Dichroic Iridescent firimu PET Zvishongedzo zvekushongedza ...
0.4mm Dichroic Iridescent PVC firimu yekugadzira shangu, ...
Blaze Dichroic Iridescent Window Firimu yeGirazi Kana Acrylic
Isu tinopa 70u + 23u Dichroic Iridescent Window Firimu 3M mhando PET Chinyorwa mylar Inoratidzira yeGirazi Kana Acrylic yekushongedza. Isu takave nyanzvi mukutakura firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, tichifukidza mazhinji emusika weEuropean neAmerica. Isu tiri kutarisira kuzove wako wenguva refu mudiwa muChina.
Chill Dichroic Iridescent Window Firimu yeGirazi Kana Acrylic
Rainbow Iridescent Yega Inonamira Window Firimu inozadza nzvimbo yako nekugara ichichinja mavara anodziya uye anowanikwa mune akasiyana mavara uye mazinga ekutakurwa kwechiedza. Iridescent Girazi Firimu inopawo hwakavanzika hwakavanzika nekuvhara pachena kujeka uye kubvumira kwakanakisa kupenya kwechiedza .. Isu takave nyanzvi mune yekushongedza firimu kweanopfuura makore gumi nemashanu, yedu iridescent hwindo firimu inozivikanwa muvazhinji veEuropean neAmerican musika. Isu tinoshuvira kuzove wako wenguva refu mudiwa muChina.